Ahoana ny fomba hidirana amin'ny efitrano fialantsasatra VIP? | Vaovao momba ny dia
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny efitrano fialantsasatra VIP?
Maria | | seranam-piaramanidina, soso-kevitra, Tsangatsangana
Raha resaka dia lavitra, indrindra rehefa mila fiaramanidina mampitohy hahatratra ny toerana halehantsika isika, ny fiandrasana tena lava dia mety ho lasa endrika ratsy indrindra amin'ny sidina iray.
Na dia mitady fomba hampialana voly ny tenantsika aza isika mandritra ny ora fiandrasana, dia toa tsy mandeha ny fotoana ary tsy mamita ny toeran'ny efitrano fiandrasana mahazatra intsony ny vatantsika. Tsy lazaina intsony fa sarotra indraindray ny mahita toerana hipetrahana hipetraka sy handao ireo fonosana miaraka amintsika.
Na izany aza, samy hafa be ny zava-misy ao amin'ny tobin'ny VIP seranam-piara. Izy ireo dia miaraka amin'ny fampiononana rehetra: sofa sy seza malefaka, fidirana amin'ny Internet, fisafidianana tsara ny kafe tsara indrindra ... Misy aza ny sasany izay mandeha lavitra kokoa ary manana buffet be dia be, aquarium goavambe, sauna Finnish ary na tobim-pitsaboana aza.
Saingy ahoana no ahafahantsika mankafy an'ireto efitrano fitsangatsanganana mahatalanjona ireto mba hahatonga ny fotoana fiandrasana amin'ny seranam-piaramanidina ho fahafinaretana? Mamaky hatrany!
1 Pass laharam-pahamehana
2 Fandaharana tsy mivadika amin'ny zotram-piaramanidina
3 Nandeha ny andro
4 Seutate VIP misaraka
5 Karatra fahatokisana orinasa
7 Fandraisana mivantana amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny VIP
8 Sakaiza VIP
Priority Pass no safidy tsara indrindra hanadinoana ny efitrano fiandrasana mahazatra ary nanjary nofaritana ho iray amin'ireo programa mahazatra indrindra eo amin'ireo mpandeha manerana an'izao tontolo izao. Indrindra ho an'ireo mandeha matetika.
Miaraka amin'izany dia afaka miditra haingana any amin'ny efitrano fialantsasatra VIP arivo mahery manerana an'izao tontolo izao ianao. Ny Priority Pass dia manana taha telo miavaka tsara araka ny tetibolan'ny mpanjifa.
voninahitra: Misy ny fitsidihana ny efitrano VIP tsy voafetra. Vidiny isan-taona 399 euro.
Standard Plus: Fitsidihana maimaimpoana 10 any amin'ny efitrano VIP misy vidiny 249 euro isan-taona. Ny fitsidihana fanampiny dia mitentina 24 euro.
Taham-pitsipika mahazatra: Ity sarany ity dia sarany 99 euro isan-taona miaraka amin'ny sarany 24 euro isaky ny mila mampiasa efitrano VIP ianao.
Fandaharana tsy mivadika amin'ny zotram-piaramanidina
Misaotra ireo programa mahatoky ny sidina izay afaka mankafy ny fiatoana miaraka amin'ny fampiononana rehetra. Amin'izany fomba izany, raha mandeha be dia be ianao miaraka amin'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mitovy, ny karatry ny mpikambana dia hamela anao hiditra amin'ny efitranon'ny VIP eny amin'ny seranam-piaramanidina nefa tsy mandoa vola euro iray akory. Toy izany koa raha manidina orinasa na kilasy voalohany ianao. Toa tsara ve?
Nandeha ny andro
Raha tsy dia mandeha matetika ianao fa tsy te hijaly mandritra ny 7 ora ao amin'ny efitrano fiandrasana mahazatra, dia tsara kokoa ny mividy pasipaoro iray andro hidirana amin'ny efitrano VIP.
Raha mahita lavitra ianao ary manao azy amin'ny fotoana dia mety handany vola eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 80 euro ianao. Ny vidiny mirary mba hahitana fiononana faran'izay betsaka amin'ny tontolo mirentirenty sy hahatongavanao any amin'izay alehanao dia nitsahatra sy nilamina.
Soso-kevitra indrindra ihany koa ny hiditra amin'ny efitrano fandraisam-bahiny VIP an'ny zotram-piaramanidina izay halehanao satria amin'ny fotoana anehoana ny tapakila dia mety hahazo tombony amin'ny fampiroboroboana na fihenam-bidy manokana ianao.
Seutate VIP misaraka
Ireo olona manana teti-bola tery mafy amin'ny dia tokony hahafantatra fa misy ny efitrano fatokana VIP tsy miankina izay matetika ny vidiny ambony indrindra dia 20 euro. Ny rojo tsara indrindra manolotra an'ity karazana serivisy ity dia ny Premium Traveller, Plaza Premium ary Airspace.
Ao amin'izy ireo no ahitanao ny zava-drehetra mampiavaka ny trano fandraisam-bahiny VIP seranam-piaramanidina: rivo-piainana milamina, seza mahazendana ary sakafo maro. Ny maharatsy azy fotsiny dia ny ankamaroan'ireo efitrano fitsangantsanganana mijanona alohan'ny maizina.
Karatra fahatokisana orinasa
Ny orinasa sasany dia manome karatra fahatokisana ho an'ny mpanjifany izay mamela azy ireo hiditra amin'ny efitrano fatoriana VIP any amin'ny seranam-piaramanidina rehefa mandeha.
Ny rindranasa finday dia mety ho vahaolana amin'ireo olantsika maro. Ity no raharaha Loungeebuddy, fampiharana azo alaina ho an'ny Android sy iOS izay manome torolàlana feno ho an'ireo efitrano fatoriana VIP isaky ny seranam-piaramanidina.
Ity fampiharana ity dia misy ny serivisy, sary ary hevitra mahaliana indrindra amin'ireo efitrano fatoriana VIP ary asehoy hoe iza amin'izy ireo no tena mifanaraka amin'ny zavatra ilainao sy ny fepetrao amin'ny tsindry tokana.
Fandraisana mivantana amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny VIP
Safidy iray hafa dia ny mankany amin'ny kaontera ny zotram-piaramanidina miaraka aminay ary mangataka ny efitrano fandraisam-bahiny ao amin'ny terminal. Ao anatin'ny seranam-piaramanidina iray ihany dia mety misy toerana fatoriana VIP samihafa ary samy manana serivisy sy sokajy samihafa izy rehetra.
Mba hidirana dia ilaina ny mandoa voucher. Ny vidin'ity serivisy ity dia miankina amin'ny sokajy ny efitrano VIP izay tianao hidirana.
Ny vahaolana farany, ny safidy ara-toekarena indrindra ary ny iray izay mila orona bebe kokoa. Ny mpandeha kilasy voalohany dia afaka mitondra namana miaraka amin'izy ireo ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny voafidiny mialoha. Ireo izay manana fahaiza-manao amin'ny olona dia afaka manandrana manangana resaka amin'ny mpandeha toy izany ary manandrana ny vintan'izy ireo. Ho vitanao ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Ahoana ny fomba hidirana amin'ny efitrano fialantsasatra VIP?
Fampahalalana azo antoka momba ny fitsidihana an'i Korea Atsimo
Hisokatra ho an'ny besinimaro ny vavahady amin'ny gorodona fito ao amin'ny Alhambra amin'ny volana novambra